“နှုတ်ခမ်း တစ်ဝိုက် မှာ မှဲ့ပါတဲ့ သူလေးများ ရဲ့ အမူအကျင့်များ…” – Let Pan Daily
“နှုတ်ခမ်း တစ်ဝိုက် မှာ မှဲ့ပါတဲ့ သူလေးများ ရဲ့ အမူအကျင့်များ…”
Let Pan | August 15, 2020 | Knowledge | No Comments
နှုတ်ခမ်း တစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့သူ အများစုဟာ သနားစရာ၊ ချစ်စရာ အလွန် ကောင်းကြပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ အပြင်ပန်းမှာ ခက်ထန် ကြမ်းတမ်းတယ် ထင်ရပေမယ့် အတွင်းစိတ် သဘောထားကတော့ အလွန် နူးညံ့ သိမ်မွေ့ပါတယ်? ပွစိပွစိလုပ်တာကတော့ ဝါသနာပါ..။
သူများကို ကူညီလိုက် လို့ ကိုယ့်မှာ သုညဖြစ်သွား ခဲ့ရင်တောင် ကိုယ်ကူညီလိုက်တဲ့သူ အဆင်ပြေနေတယ် ဆိုရင် ကြည်နူးပီတိ ဖြစ်နေတတ်တဲ့ သူတွေပါ နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့သူတွေဟာ စေတနာလည်း အရမ်းကောင်းသလို သံယောဇဉ်လည်း အလွန်ကြီးကြတဲ့ သူတွေပါ။ သူတို့ဟာ စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက် လည်း လွယ်ပါတယ်..။
ခဏခဏလည်း စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက် တတ်ပါတယ် စိတ်ကောက်လည်း ခဏပဲ။ ချော့မယ့်သူ ရှိရင် တော့ ဟန်အမူ ပိုပြီး ဆက်ပြီးတော့ စိတ်ကောက်ဟန်… ဆောင်နေတတ်ပါတယ် ။ ချော့မယ့်သူ မရှိရင်တော့ သူ့အလိုလို ပျော့သွားရော နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့သူဟာ ချစ်သူအပေါ်မှာလည်း ကလေးတစ်ယောက်လို ဆိုးနွဲ့ချင်ကြပါတယ်..။
အချစ်လည်း အရမ်းကြီးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချစ်စိတ်ကြီးတော့ ဘယ်လောက်ကြီးတဲ့ အပြစ် ဖြစ်ဖြစ် စိတ်ရှည်သည်းခံပြီး နားလည်ခွင့်လွှတ် ပေးနိုင်တဲ့ သူတွေပါ။
ဒါပေမယ့် စိတ်ထဲမှာတော့ မတင်မကျနဲ့ အမြဲ သံသယ ဖြစ်နေတတ်တယ်။ ဖြစ်ခဲ့သမျှ အတိတ်တွေကိုတော့ အမြဲ မမေ့ဖျောက်နိုင်ပဲ အမှတ်ကြီးတဲ့ သူတွေပါ..။
နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့ သူတွေဟာ အများအားဖြင့် ကိုယ့် ဘဝကိုစိတ်ညစ်စရာ ကောင်းတယ်လို့ ထင်နေတတ်ပါတယ်..။
သူများ အကြည့်တွေကိုလည်း သည်းမခံနိုင်သလို သူ့ကို သူများတွေက စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုထင်နေမလဲ ဆိုတာကို အမြဲ သိချင်နေသူတွေပါ..။
နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့သူတွေဟာ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို….. တောင် ယုံကြည်ဖို့ ခက်ခဲနေတတ်တယ်..။
သူ့မှာ အတွေးအခေါ်ကောင်းတွေ ရှိနေတာတောင်… သူများစကားကို ယုံပြီး လက်ခံတတ်တဲ့အတွက် အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း စဉ်းစားနေတာနဲ့ပဲ အချိန်ကုန်သွားတတ်တယ်..။
လုပ်လိုက်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဟာ အများအားဖြင့် ပြသနာ ဖြစ်မယ်၊ ဆုံးရှုးံမယ် ဆိုပြီး မကောင်းတဲ့ဘက်ကပဲ အများအားဖြင့် တွေးလေ့ရှိတယ်။ နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့သူတွေဟာ ငြိမ်းချမ်းခြင်းကို မြတ်နိုးသူတွေပါ..။
ဖြစ်နိုင်ရင် ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းပဲ ငြိမ်းချမ်းစွာ သာသာ ယာယာ နေသွားချင်ကြတဲ့ သူတွေပါ။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို မြတ်နိုးပေမယ့်လည်း တောင်းပန်ရမှာကိုတော့ သေလောက်အောင် မုန်းတယ်..။
သူအမှားတစ်ခု လုပ်မိပြီ ဆိုရင်လည်း နောင်တရမဆုံး ဖြစ်နေတတ်တာ နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့ သူတွေပါ နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့ သူတွေဟာ သူတစ်ပါးအပေါ် မှာကျတော့….. ဦးစားပေးတတ်တယ်။ .သနားတတ်တယ်..။
အားနာတတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်မိသားစု အပေါ်မှာတော့ အနိုင် ယူချင်တယ်။ နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့ သူတွေကို ချစ်သူခင်သူလည်း ပေါသလို အပေါင်းအသင်းလည်း များပေမယ့်..၊
အများအားဖြင့် တစ်ယောက်တည်း နေရတာကိုပဲ…သဘောကျပြီး တစ်ယောက် တည်းပဲ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ် နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့သူတွေက ဒေါသကလည်း အရမ်းကြီးတတ်တယ်..။
ဒါပေမယ့် တော်ရုံတန်ရုံ စိတ်မဆိုး တတ်ပါဘူး။ စိတ်ကလည်း အရမ်းမြန်တယ်။ သူမှန်တယ် ထင်ရင် ဘယ်သူ့ကိုမဆို ရင်ဆိုင်ရဲတယ်။ ဘာမဆို လုပ်ရဲတယ်။ ကိစ္စတစ်ခုကို လုပ်ချင်ပြီဆိုရင်လည်း ဇွတ်လုပ်တတ်တယ်..။
သူ့ကို မခံချင်အောင်၊… ဒေါသထွက်အောင် မထိတထိ သွားလုပ်တဲ့သူတွေဆို …အရွဲ့ပြန်တိုက်ရမှကို ကျေနပ်တယ်။ စိတ်တိုနေပြီဆိုရင်တော့ မျက်နှာထားက တင်းတင်းနဲ့ တစ်လောကလုံး သူ့လုပ်စာကိုပဲ ထိုင်စားနေရသလိုဘယ်သူနဲ့မှကို စကား မပြောချင်တော့ဘူး နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့သူတွေဟာ သူများအပေါ်မှာလည်း ကိုယ့် သိက္ခာ အကျခံပြီးတော့ကို ကူညီပေးတတ်တဲ့ သူတွေပါ..။
မိသားစုနဲ့ ပတ်သတ်ရင်လည်း သံယောဇဉ် အရမ်းကြီးပြီး ခင်တွယ် တတ်တယ်။ နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့ သူတွေဟာ ချစ်သူအပေါ်မှာလည်း…. ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ကူး ထက် ချစ်သူ ရဲ့ စိတ်ကူးကို ပိုပြီး ဦးစားပေး တတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကိုလည်း လိုတာထက် ပိုပြီးတော့ သဝန်တို တတ်ကြတယ်။ ပြီးတော့ စိတ်ထဲမှာ ရှိတာကို ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း မပြောရဲကြဘူး..။
နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့ သူတွေဟာ ချစ်သူကို အရမ်း ချစ်သလောက် မြတ်နိုးသလောက် ဂရုစိုက်သလောက် ကြင်နာ သလောက် တွယ်တာသလောက် အလေးထား သလောက် နားလည်မှု တွေခွင့်လွှတ်မှုတွေရှိသလောက် အများအားဖြင့် သူ့ချစ်သူအပေါ် သူပေးနိုင်သလောက် ပြန်မရတတ်ကြပါဘူး
နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့ သူတွေဟာ တစ်ယောက်ဆို တစ်ယောက် ပိတောက်ဆို ပိတောက်ပါပဲ။ ဘူးဆို ဖရုံမသီးတတ်ပါဘူး စိတ်ခံစားမှုကလည်း အရမ်း ပြင်းထန်တဲ့အတွက် ချစ်သူနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘာမဟုတ်တာလေးကအစ စိတ်ထဲမှာ ဝမ်းနည်း ခံစားတတ်ပါတယ်..။
နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက်မှာ မှဲ့လေးနဲ့ ချစ်သူ တစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားရပြီလား .. ဒါဆိုရင် ဂုဏ်ယူလိုက်ပါတော့ .. သင်ချစ်တာထက် သူတို့က နှစ်ဆလောက်ပိုချစ်မှာဖြစ်သလို ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးမှာ သင့်လို ချစ်သူမျိုးကို ရထားတဲ့အတွက် အရမ်းကံကောင်းတယ်ဆိုပြီး ပျော်ရွှင်နေကြတဲ့ သူလေးတွေမို့လို့ပေါ့…။ ။
ကိုဗစ် ကပ်ရောဂါ ကာလအတွင်းမှာ လူတွေ အဖြစ်များလာတဲ့ နောက်ထပ်ရောဂါ တခုအကြောင်း
ကတိ အတိုငျး ဒေါကျတာခငျခငျကွီး တငျပေးလိုကျတဲ့ ကာကှယျဆေးထိုးခွငျး ၏ အကြိုး ကြေးဇူး ၈ ခကျြ
ကိုဗစ် ကို တားဆီးနိုင်တဲ့ ပဋိဇီဝပစ္စည်း တမျိုးကို ရှာတွေ့ပြီဟု အမေရိကန် ကုမ္ပဏီကြေညာ
ရှယ်ထားနော်! ဆေးနည်း ပေါင်းစုံတွေ တစ်သက်လုံး အသုံးဝင်တယ်